Vaovao - Ny marina momba ny flash sy ny famokarana tontolo iainana
Ny marina momba ny tselatra tontolo iainana sy ny famokarana
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nisy fanavaozana be dia be nitranga teo amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy maitso. Tsy vitan'ny fidirana amin'ny safidy marobe amin'ny fikolokoloana ny hoditra madio sy tsy misy poizina, fikolokoloana volo ary kosmetika, fa hitantsika koa ny marika manova ny fifantohany amin'ny famokarana vokatra maharitra sy fonosana, na azo averina simba, azo averina na azo averina simba.
Na eo aza izany fandrosoana izany dia toa mbola misy iray ihany ny akora hatsaran-tarehy, na dia iray amin'ireo akora manimba tontolo iainana indrindra aza: ny glitter. Ny glitter dia ampiasaina amin'ny kosmetika sy ny poleta. Izy io koa dia nanjary mpiorina malaza amin'ny vokatra fandroana, alàlan'ny masoandro ary ny fikarakaranay ny vatana, izay midika fa hiditra ao amin'ny lalan-dranontsika izy io ary hitsabo antsika rehefa mivoaka any anaty tatatra izy. Niteraka fahasimbana lehibe ny planeta.
Soa ihany fa misy fomba hafa azo soloina tontolo iainana. Na dia mety tsy hanao fety na fety mozika amin'ny ho avy aza isika, dia fotoana mety izao hifindrana amin'ny fitaovana plastika plastika. Etsy ambany dia hahita mpitari-tselatra tompon'andraikitra ianao (indraindray sarotra).
Hatramin'izao, fantatsika tanteraka ny krizy fandotoana manerantany sy ny voka-dratsin'ny plastika eto amin'ny ranomasina. Mampalahelo fa ny glitter hita amin'ny hatsarana iraisana sy vokatra fikarakarana manokana no meloka.
“Ny glitter nentim-paharazana dia mikroplastic amin'ny ankapobeny, fantatra amin'ny vokany manimba amin'ny tontolo iainana. Plastika kely tsy mampino izy io, ”hoy ny mpanorina ny Aether Beauty ary ny filohan'ny sampana fikarohana sy fampandrosoana maharitra an'i Sephora, Tiila Abbitt. "Rehefa hita ao anaty kosmetika ireo sombin-javatra tsara tarehy ireo dia voatendry hivezivezy any anaty lakandranonay izy ireo, handalo mora foana amin'ny rafitra filtration tsirairay avy, ary hiditra amin'ny lalan-drano sy ny ranomasimbe farany amintsika, ka vao mainka hampitombo ny olana ateraky ny fandotoana mikroplastika. . ”
Ary tsy mijanona eo. “Mila an'arivony taona maro ny famolahana sy famoahana ireo mikroplastika ireo. Diso amin'ny sakafo izy ireo ary nohanin'ny trondro, vorona ary plankton, manimba ny lalan-drantsika, misy fiatraikany amin'ny fitondran-tenany, ary mitarika any amin'ny fahafatesana amin'ny farany. . ” Hoy i Abitt.
Izany dia milaza fa zava-dehibe amin'ny marika ny manaisotra ny famirapiratra mifototra amin'ny plastika amin'ny volavolan-dry zareo ary mifindra amin'ny safidy maharitra. Ampidiro ny tselatra voajanahary.
Rehefa mitombo hatrany ny fangatahan'ny mpanjifa ny faharetana sy ny estetika dia mitodika amin'ireo singa maitso ny marika mba hampamirapiratra kokoa ny vokatr'izy ireo. Raha ny filazan'i Aubri Thompson, mpahay simia hatsaran-tarehy madio sy mpanorina an'i Rebrand Skincare, dia misy karazany roa ny glitter "friendly eco" ampiasaina ankehitriny: miorina amin'ny zavamaniry sy miorina amin'ny mineraly. Hoy izy: "Ny tselatra miorina amin'ny zavamaniry dia azo avy amin'ny cellulose na akora hafa azo havaozina, ary avy eo azo nolokoana na nopetahana mba hamokarana vokatra maro loko." “Ny tselatra miorina amin'ny mineraly dia avy amin'ny mineraly mika. Manana an'izany izy ireo. Ireo dia azo trandrahana na foronina ao amin'ny laboratoara. ”
Na izany aza, tsy voatery ho tsara amin'ny planeta ireo fomba hafa nentim-paharazana ireo, ary samy manana ny fahasarotany avy ny safidy tsirairay.
Mica dia iray amin'ireo safidy mineraly be mpampiasa indrindra, ary maizina ny indostria ao aoriany. Nilaza i Thompson fa na dia misy aza izy io, dia fitaovana voajanahary izay tsy miteraka microplasticity ny tany, fa ny fizotran'ny fitrandrahana ao aorinan'io dia fizotran'ny herijika miaraka amin'ny tantaran'ny fitondran-tena tsy etika, anisan'izany ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Izany no antony manomboka mampiasa mika synthetic na fluorophlogopite synthetic ireo marika toa an'i Aether sy Lush. Ity fitaovana vita amin'ny laboratoara ity dia heverina ho azo antoka amin'ny tontolon'ny manam-pahaizana momba ny famerenana kosmetika, ary madio sy mamiratra kokoa noho ny mika voajanahary, noho izany dia lasa malaza kokoa izy io.
Raha mampiasa mika voajanahary ny marika dia tadiavo (na anontanio!) Hanamafisana ny rojom-pamokarana etika. Samy mampanantena i Aether sy i Beautycounter fa hanome mika tompon'andraikitra rehefa mampiasa akora natoraly, ary ity farany kosa dia miasa am-pahavitrihana hamorona fiovana tsara eo amin'ny sehatry ny mika. Misy ihany koa ny safidy loharano mineraly etika hafa, toy ny sodium calcium borosilicate sy calcium aluminium borosilicate, izay vita amin'ny flakes fitaratra borosilicate kely azo antoka amin'ny maso miaraka amin'ny fonosana mineraly ary vita amin'ny marika toy ny Rituel de Fille no ampiasaina amin'ny cosmetika.
Raha resaka glitter avy amin'ny zavamaniry dia matetika ampiasaina amin'ny vokatra mamirapiratra sy gel be dia be ny zava-maniry ankehitriny, ary nanjary sarotra kokoa io toe-javatra io. Ny cellulose dia matetika avy amin'ny hazo mafy toy ny kininina, saingy, araka ny fanazavan'i Thompson, ny sasany amin'ireo vokatra ireo ihany no tena azo ovaina. Betsaka ny plastika mbola misy plastika kely, mazàna nampiana ho loko sy gloss manarona, ary tsy maintsy atao compost indostrialy mba ho lo tanteraka.
Raha resaka glitter biodegradable, ny fanadiovana maintso na ny varotra mamitaka dia fahita eo amin'ireo marika hatsaran-tarehy sy ireo mpanamboatra mba hahatonga ny vokatra ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana noho ny tena izy. "Raha ny tena izy, olana lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria io," hoy i Rebecca Richards, tompon'andraikitra voalohany amin'ny serasera (raha ny marina) ny marika flash BioGlitz izay azo ovaina. "Nihaona tamin'ny mpamokatra izay nilaza fa diso izy ireo fa manao pirinty biodegradable, saingy raha ny marina dia nanao glitter izay azo zezika tamin'ny indostrialy izy ireo. Tsy vahaolana io satria fantatray fa ny vovoka manelatselatra dia saika tsy hiditra amin'ny sehatry ny Compost indostrialy mihitsy. ”
Na dia toa safidy tsara aza ny "compostable" amin'ny voalohany dia mitaky ny manangona ny toerana rehetra efa niasa ny mpitaingina azy ary avy eo mandefa azy ireo-tsy azon'ny mpankafy flash mahazatra atao. Ho fanampin'izay, araka ny nomarihin'i Abbitt, ny fizotry ny fanangonam-bokatra dia haharitra sivy volana mahery, ary saika tsy azo atao ny mahita trano afaka mandoto na inona na inona mandritra io fotoana io.
"Naheno ihany koa izahay momba ny orinasa sasany milaza fa mivarotra akora manelatselatra biodegradable tena izy, fa ny fampifangaroana azy ireo amin'ny plastika mamirapiratra hampihena ny vidiny, ary ireo orinasa mampiofana ny mpiasan'izy ireo hamariparitra ny fitaovany mamiratra ho fitaovana" ratsy ". Misafotofoto minia ireo mpanjifa izay mety tsy mahafantatra ny “Plastika rehetra dia simba, izay midika fa ho potika plastika kely kokoa izy io. "Nanampy i Richards.
Taorian'ny nifandraisako tamin'ny tantaran'ny marika maro dia gaga aho nahita fa ny safidy malaza indrindra dia misy plastika kely ary mitana ny laharana voalohany amin'ny lisitra "vokatra mamirapiratra biodegradable tsara indrindra" ihany, fa ireo plastika ireo dia tena tsy dia lafo. Nody sarona toy ny biodegradable, ny sasany aza miova endrika tsy misy plastika.
Na izany aza, tsy diso foana ny marika. Thompson dia nilaza hoe: "Amin'ny tranga maro, io dia vokatry ny tsy fahampian'ny fampahalalana fa tsy ny lolompo." “Mampita vaovao amin'ny mpanjifany ny marika, saingy mazàna ny marika dia tsy mahita ny niandohana sy ny fanodinana akora. Olana ho an'ny indostria iray manontolo io mandra-pahatongan'ny marika Mety ho voavaha ihany izany rehefa takiana amin'ny mpamatsy hanome mangarahara tanteraka. Amin'ny maha mpanjifa antsika, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mitady marika fanamarinana sy mailaka hahazoana fampahalalana bebe kokoa. "
Marika iray azonao itokisana amin'ny biodegrade mihitsy no BioGlitz. Ny famirapiratany dia avy amin'ny mpanamboatra Bioglitter. Raha ny filazan'i Richards, ity marika ity no hany jiro manjelanjelatra eran'izao tontolo izao. Ny cellulose kininina voajinja maharitra dia apetaka anaty horonantsary, nolokoana loko maontim-bolo voajanahary ary avy eo notapahina tsara tamin'ny haben'ny sombintsombiny samihafa. Marika mamiratra hafa miorina amin'ny zavamaniry izay biodegradable tanteraka (na dia tsy mazava aza raha mampiasa Bioglitter) dia misy ny EcoStardust sy Sunshine & Sparkle.
Ka raha resaka alternatives tselatra rehetra no jerena, inona ny safidy mety indrindra? Nasongadin'i Richards fa: "Rehefa dinihina ny vahaolana maharitra, ny zava-dehibe indrindra dia ny mijery ny fizotry ny famokarana fa tsy ny valiny farany fotsiny." Miaraka amin'izany ao an-tsaina, azafady mba mangarahara momba ny fanaonao manokana ary afaka manamarina fa misy ny vokatra. Miantsena any amin'ny marika voajanahary. Ao anatin'ny tontolo iray izay mora ny mitaky andraikitra amin'ny marika amin'ny alàlan'ny media sosialy, dia tsy maintsy milaza ny ahiahintsika sy ny fitakiantsika isika. "Na dia asa sarotra aza ny mamantatra hoe iza amin'ireo vokatra ireo no tsy mampidi-doza amin'ny planetantsika, fa tsy milaza fotsiny ny vokatra izay tsy natao ho an'ny tanjona ara-barotra, dia manentana ny mpanjifa liana sy be fiahiana izahay handalina lalina ireo orinasa tohanany, mametraka fanontaniana, ary aza matoky ny fitakiana maharitra momba ny faharetana. ”
Amin'ny famakafakana farany, ny zava-dehibe indrindra dia amin'ny maha mpanjifa antsika dia tsy mampiasa fitaovana plastika nentim-paharazana intsony isika, ary tsy maintsy mijery ihany koa ny isan'ny vokatra novidianay matetika. Thompson dia nilaza hoe: "Heveriko fa ny fomba tsara indrindra dia ny manontany tena hoe iza amin'ireo vokatra no tena tokony ahitana glitter sy shimmer." “Mazava ho azy fa misy ny vokatra sasany izay tsy hitovy raha tsy teo izy! Saingy ny fihenan'ny fanjifana dia lafiny iray amin'ny fiainantsika. Ny fampandrosoana maharitra indrindra azo tratrarina. ”
Etsy ambany, ny vokatra maharitra maharitra ankafizinay izay azonao atokisana dia safidy tsara sy marani-tsaina kokoa ho an'ny planetantsika.
Raha te hamelombelona ny ekolojika ianao nefa mahatsiaro ho tsy milamina, dia afaka mameno ny fepetra takiana aminao ny Explorer Pack an'ny BioGlitz. Ity sety ity dia misy tavoahangy dimy an'ny plastika eucalyptus cellulose tsy misy plastika amin'ny loko sy habe samy hafa, izay mety tsara ampiasaina na aiza na aiza amin'ny hoditra. Mifikitra fotsiny amin'ny alàlan'ny ahidrano Glitz Glu na fototra hafa safidinao. Tsy misy farany ny azo atao!
Rituel de Fille, marika kosmetika fanadiovana, dia tsy mbola nampiasa glitter vita amin'ny plastika tamin'ny vatomamy hafa erak'izao tontolo izao, fa mifidy shimmer miorina amin'ny mineraly azo avy amin'ny vera borosilicate azo antoka sy mika sentetika. Ny sootan'ny lanitra mahavariana eto an-tany dia azo ampiasaina hanampiana taratra fandokoana amin'ny faritra rehetra amin'ny tarehy (tsy ny maso ihany).
Nanomboka ny taona 2017, ny EcoStardust monina any UK dia namokatra fifangaroan-javatra mamirapiratra mifototra amin'ny cellulose miorina amin'ny zavamaniry, izay azo avy amin'ny hazo kininina maniry tsara. Ny andiany farany indrindra, Pure sy Opal, dia tsy misy plastika 100%, ary nosedraina ho voajanahary tanteraka amin'ny rano madio, izay tontolo iainana sarotra indrindra. Na dia plastika 92% ihany aza no ao anatin'ireo vokatra taloha, dia mbola afaka manimba ny tontolo iainana (na dia tsy tanteraka) amin'ny tontolo voajanahary aza izy ireo.
Ho an'ireo maniry somary manintona kely nefa tsy dia mampiasa loatra, azafady mba diniho ity famirapiratana manjelanjelatra sy malefaka avy amin'ny Beautycounter ity. Ny marika dia tsy mahita mika tompon'andraikitra avy amin'ny plastika manjelanjelatra vita amin'ny plastika fotsiny ho an'ny vokariny rehetra, fa miezaka koa manao ny indostria mica ho mangarahara sy etika kokoa.
Na dia tsy tianao aza ny mamirapiratra dia afaka miala sasatra ao anaty kovetabe fandroana mamirapiratra ianao. Mazava ho azy, toy ny filentehantsika ihany, ny fantsonantsika dia miverina mivantana amin'ny làlambe, noho izany dia zava-dehibe ny hitadidiana ireo karazana vokatra ampiasaintsika hilentika mandritra ny andro. Lush dia manome ny vokatra ny famirapiratan'ny mika sentetika sy borosilicate fa tsy ny famirapiratry ny mika voajanahary sy ny gloss plastika, mba hahafahanao miaina mora foana satria fantatrao fa ny fotoana fandroana dia tsy hoe sariaka amin'ny tontolo iainana ihany, fa etika koa.
Mitady mamiratra manjelanjelatra fa tsy manjelanjelatra? Tsy afa-tsiny ny manasongadina an'i Aether Beauty's Supernova. Mica no etika sy diamondra mavo vaky ilay penina mba hanomezana fahazavana volamena an'izao tontolo izao.
Farany, zavatra izay mahatonga ny fampiharana sunscreen hahafinaritra! Ity tabilao-masoandro SPF 30+ tsy misy rano ity dia ampidirina amina botanika mahavelona, ​​antioksida ary fatra mamirapiratra toy izay plastika. Ny marika dia nanamafy fa ny famirapiratany dia voajanahary 100%, azo avy amin'ny lignocellulose, ary nosedraina tsy miankina amin'ny fahasimbana amin'ny rano madio, rano masira ary tany, noho izany dia mahatsapa tsara rehefa apetraka ao anaty kitapo amoron-dranomasina.
Raha te-hampiomana ny hoho ianao amin'ny fialan-tsasatra, dia ampiasao kitapo fialantsasatra vaovao avy amin'ny marika fikolokoloana fantsika madio Nailtopia. Raha nanamafy ny marika, ny glitterer rehetra ampiasaina amin'ireto loko fanontana voafetra ireto dia azo zahana 100% ary tsy misy plastika. Manantena izahay fa ireo aloka manjelanjelatra ireo dia nanjary endri-javatra maharitra amin'ny laharan'ny marika.